कसको थालमा कसले प्वाल पार्यो ? आफूमाथिको आरोपको छानबिन गर्न भुवनको उजुरी – Nepal Japan
नेपाल जापान १९ असार १३:२७
भारतमा चलचित्र अभिनेता सुशान्त सिं राजपुतको आत्महत्यापछि त्यहाँ खैलाबैला मच्चिएको छ र स्थापित निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेताहरुको नातावादले नयाँ कलाकारहरुलाई अवसर नदिएको भन्दै बिरोध भैरहेका बेला नेपालमा सदावहार अभिनेता भुवनकेसीबिरुद्ध उनैले डेब्यु गराएकी नायिका साम्राज्ञी शाहले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइन ।
साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालहरुमा धारावाहिक रुपमा भुवनले आफूमाथि गरेका दुव्यर्वहार भन्दै विभिन्न घटना सार्वजनिक गरी नेपाली चलचित्रमा पनि पुरानाहरुले नयाँलाई अपमानित गर्ने गरेको आरोप लगाएपछि अभिनेता केसीले जुन थालमा खायो त्यही थाल प्वाल पार्ने भन्दै प्रतिउत्तर दिएका थिए ।
यो विषयलाई संचार माध्यमहरुले निकै चासो दिए भने युटुबेहरुले त छोड्ने कुरै भएन । यसबीचमा भुवनले बिहीबार साम्राज्ञी विरुद्ध कलाकार संघमा उजुरी गरेका छन् । बिहीबार फेसबुकमा निवेदनको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफूले कलाकार संघमा उजुरी दिएको दिएको जानकारी गराएका हुन् ।
साम्राज्ञीको कारणले सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र नै बदनाम भएको भन्दै उनले छानबिनको लागि माग गर्दै साम्राज्ञीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनको स्ट्याटसमा लेखिएको छ- “हरेक कथाका तीनओटा पाटा हुन्छन् । अरुको, आफ्नो र सत्यको । र सत्य के हो ? त्यो अब नेपाल कलाकार संघ र कानुन ले नै फैसला गर्नेछ । यससम्बन्धी छानविनको लागि मैले नेपाल चलचित्र कलाकार संघमा निवेदन दिई सकेको छु ।”